Ukuveliswa kweBhola abavelisi, abaXhasi - China iBhola ekhulayo iBhola
Umqolo omnye NjengoGroove Ball iibheringi
● Umqolo omnye iibheringi zebhola emqengqeleki, iibheringi zokuqengqeleka lolona lwakhiwo lubalaseleyo, uluhlu olubanzi lwezicelo.
● I-torque ye-friction ephantsi, efanelekileyo kakhulu kwizicelo ezifuna ukujikeleza kwejubane eliphezulu, ingxolo ephantsi kunye ne-vibration ephantsi.
● Isetyenziswa ikakhulu kwizithuthi, umbane, nakwabanye oomatshini abahlukeneyo bemizi-mveliso.
Umqolo ophindwe kabini kwiibheringi zebhola
● Uyilo ngokulinganayo luyafana nolomqolo omnye weebheringi zebhola.
● Ngaphandle kokuthwala umthwalo we-radial, ikwanokuthwala umthwalo we-axial osebenza kumacala amabini.
● Izivumelwano ezigqwesileyo phakathi kohlanga kunye nebhola.
● Ifumaneka kuphela njengeebheringi ezivulekileyo kwaye ngaphandle kwamatywina okanye amakhaka.
Stainless Deep Groove Ball iibheringi
● Isetyenziselwa ukwamkela umthwalo we-radial, kodwa inokumelana nomthwalo othile we-axial.
● Xa ukucoca kwe-radial yebhere kukhula, inomsebenzi wokuthwala ibhola ye-angular.
● Inokuthwala umthwalo omkhulu we-axial kwaye ilungele ukusebenza ngesantya esiphezulu.
● Ngaba utshintsho oluthwala ibhola ye-groove enzulu.
● Inezibonelelo zesakhiwo esilula, isantya esiphezulu kunye ne-torque encinci yokukhubazeka.
● Unokuthwala imithwalo ye-radial kunye ne-axial ngexesha elinye.
● Unokusebenza ngesantya esiphezulu.
● Ubukhulu beAngle yoqhakamshelwano kukuba, amandla aphezulu e-axial.
Umqolo omnye weAngular zoQhagamshelwano lweBhola
● Inokuthwala kuphela umthwalo we-axial kwicala elinye.
● Kufuneka ifakwe ngababini.
Umqolo ophindwe kabini oQhelekileyo woQhakamshelwano lweBhola yeBhola
● Uyilo lweebhloko ezinemigca emibini emile yebhola yokudibanisa iyafana naleyo yomqolo omnye iibheringi zebhola emacaleni, kodwa ithatha indawo encinci yezihlunu.
● Ngaba unokuthwala umthwalo we-radial kunye nomthwalo we-axial osebenza kumacala amabini, unokunciphisa ukufuduka kwe-axial kwe-shaft okanye kwindlu kumacala amabini, i-Angle yokudibana ngama-30 degrees.
● Inikeza ukuqina okuphezulu kokuthwala, kwaye inokumelana nokubhukuqa torque.
● Isetyenziswa kakhulu kwindawo engaphambili yevili lemoto.
Amanqaku amane Ball Ball iibheringi
● Ukuthwala ibhola yamanqaku amane enoluhlobo lohlobo olwahluliweyo, kunokuthiwa siseti yebhola yoqhakamshelwano ene-angular enokuthwala umthwalo we-axial bidialctional.
● Ngomqolo omnye kunye nomqolo ophindwe kabini womsebenzi wokuthwala ibhola, isantya esiphezulu.
● Isebenza kuphela ngokufanelekileyo xa sele kwenziwe iindawo ezimbini zonxibelelwano.
● Ngokubanzi, ilungele umthwalo we-axial omsulwa, umthwalo omkhulu we-axial okanye ukusebenza ngesantya esiphezulu.
Iibheringi zeBhola ezizimeleyo
● Inomsebenzi ofanayo wokulungisa njengokuzenzekelayo kokulungelelanisa ibhola
● Inokuthwala umthwalo we-radial kunye ne-axial load kumacala amabini
● Umthamo omkhulu womthwalo weradial, ulungele umthwalo onzima, umthwalo wempembelelo
● Iimpawu zayo kukuba umjikelo weringi engaphandle ujikeleze ngomsebenzi wokufaka iziko ngokuzenzekelayo
● Yenzelwe ukumelana nemithwalo yesantya esiphezulu
● Inomsesane omile okwe-washer kunye nomqengqeleki webhola
● Iibheringi zebhola ezitshixwayo ziyabotshelelwa
● Yahlulahlulwe yohlobo lwesihlalo esicaba kunye nebhola yokuzilungelelanisa
● Ukuthwala kunokuthwala umthwalo we-axial kodwa kungabi ngumthwalo we-radial